यसरी गरिँदै छ ‘रवि लामिछानेको देवत्वकरण !’
२०७५ असार ७, विहिबार
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेबारे सोसियल मिडियामा ‘देवत्वकरण’ र ‘अपराधीकरण’ को सिलसिला सुरु भएको छ ।
अहिलेको यो परिस्थिति लामिछानेका लागि निकै चुनौतीपूर्ण समय हो । अझ मिडियाको बजारमा लामिछाने आफैंले काम गरिरहेको संस्थाको ‘गुडविल’ कस्तो छ भन्ने विषयले उनको स्वच्छतासँग अन्तरविरोध वा सामाञ्जस्य के राख्छ ? यो पनि नेपाली मिडियाभित्र बहसको विषय हो ।
अमिरिकामा आफूले लिएको ऋण तिर्न अझै बाँकी नै रहेको लामिछानेले आफैं बताएका छन् । र, त्यो ऋण तिर्ने प्रक्रियामा अझै केही समय लाग्ने उनको अभिव्यक्ति छ ।
तर, पत्रकारलाई समयमा तलब खुवाउन नसक्ने र आफैं कमाएर खानुपर्ने गरिब मिडियामा काम गरेकै भरमा लामिछानेले अब अमेरिकी सरकारको ऋण तिर्न सक्लान् ? लामिछानेको आर्थिक आयआर्जनको स्रोत के हो ? प्रेस काउन्सिलका एकजना सदस्य भन्छन्- अरुको रौंचिरा खोतल्दै हिँड्ने लामिछानेको विषयमा जनमानसमा यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । र, यस्ता प्रश्न उठाउनेहरुलाई गाली नगरिकन लामिछानेले नम्र भाषमा जवाफ दिएको खण्डमा मात्रै उनले अमेरिकामा सभ्यता सिकेर आएका रहेछन् भनेर मान्न सकिन्छ ।